Iindaba -Qaphela ngokuchanekileyo izongezo zokutya
Umlawuli we-Acidity: uswiti kwaye umuncu ndim
Ukuze ufumane ukutya ngombala olungileyo, incasa, kunye nencasa, ukuthanda ukutya kubalulekile. Umlawuli weasidi luhlobo lwearhente yokunambitha, ekwabizwa ngokuba yiarhente emuncu. Ukongeza iiarhente ezimuncu ekutyeni kunokunika abantu isikhuthazo esihlaziyayo, kwandise umdla wokutya, kwaye kube nefuthe lokuthintela ukubola.
Ihlulwe ngokubanzi ibe yi-acid engaphiliyo kunye ne-organic acid. I-acid esetyenziswa ngokuxhaphakileyo ekutyeni yi-phosphoric acid, kwaye ii-acid ezisetyenziswa rhoqo zezi:icitric acid, i-lactic acid, i-acetic acid, i-tartaric acid, imic acid, fumaric acid, ascorbic acid, i-gluconic acid, njl.
I-Phosphoric acid inokutshintsha i-citric acid kunye ne-malic acid kwishishini lesiselo, ngakumbi njengearhente emuncu kwiziselo ezingezizo iziqhamo apho i-citric acid ingalunganga. Ingasetyenziswa njengesilawuli se-pH kwishishini lokuphisa, kunye nesisombululo sesondlo segwele kumzi-mveliso wegwele ukukhuthaza ukukhula kweeseli zeeseli. Ingasetyenziselwa ukudibanisa ne-antioxidants kumafutha ezilwanyana, kwaye inokusetyenziselwa ukucacisa ulwelo lwe-sucrose kwinkqubo yokuvelisa iswekile.
I-asidi ye-citric ikhona kwizicubu zezityalo nezilwanyana kunye nobisi, kwaye iziqhamo ze-citrus zinomxholo ophezulu. I-crystalline citric acid ngamasuntswana amhlophe abonakalayo okanye umgubo omhlophe wecrystalline. Anhydrous citric acid ziikristale ezingenambala okanye umgubo omhlophe, awunamakha kwaye ngaphandle kwencasa emuncu. Citric acid yeyona arhente omuncu ubhetyebhetye kwaye ubhetyebhetye. Inokunyibilika okuphezulu kunye namandla okukhohlisa kwi-ion zentsimbi. Ukongeza ekusetyenzisweni njengearhente emuncu ekutyeni, i-citric acid ikwasetyenziswa njengesiqhoboshi, i-antioxidant synergist, i-pH yokulungisa, njl.
I-Lactic acid yafunyanwa okokuqala kwiyogathi, yiyo loo nto igama. Ukutya i-lactic acid (i-50% yesiqulatho) inokusetyenziswa njengearhente emuncu kwiziselo ezinxilisayo, iziselo zeyogathi, iwayini eyenziweyo, iviniga eyenziweyo, isosi ebabayo yesosi, ukhuko, njl.njl. yokunonga, kodwa ikwanesiphumo sokuthintela ukukhula kweentsholongwane.
Imalic acid iqulethwe ngama-apile, yiyo loo nto igama. Inencasa emuncu ethambileyo kwaye ihlala ixesha elide. Kwithiyori, inokutshintsha ngokupheleleyo okanye ikakhulu ukubuyisela indawo ye-citric acid esetyenzisiweyo kukutya nakwiziselo. Ngaphantsi kwemeko yokufumana iziphumo ezifanayo, umyinge ophakathi yi-8% -12% ngaphantsi kwe-citric acid (iqhezu lobunzima). Ngokukodwa, i-malic acid isetyenziswa kwizidlo ezinencasa yeziqhamo, iziselo ezinekhabhon, njl.njl. E-United States, i-malic acid ihlala isetyenziswa kukutya okutsha. Elona xabiso liphezulu ngokweemfuno eziqhelekileyo zemveliso, kwaye i-ADI ayifuni migaqo ikhethekileyo.
Isigcinakalisi: Amaxesha amane onyaka makakhuseleke kwaye babe ngabamkeli kwangoko
Izinto ezisigcinayo, njengoko igama lisitsho, zizongezo zokutya ezisetyenziselwa ukugcina ukutya okonakalayo njengemifuno, iziqhamo, kunye nenyama zintsha. Ngenxa yolondolozo, isoseji yeham, iisoseji, inyama ephekiweyo enkonkxiweyo kunye nokunye ukutya okuthengiswa kwivenkile kunokugcina incasa yazo ixesha elide; ngenxa yolondolozo, singatya umgama omde othuthwayo ukusuka kwezinye iindawo unyaka wonke. Imifuno emitsha kunye neziqhamo.
Izinto ezisetyenziswa rhoqo ekulondolozeni ukutya ziquka i-benzoic acid, ibutylhydroxyanisole kunye ne-dibutylhydroxytoluene. Phakathi kwazo, i-butyl hydroxyanisole sisilondolozo esifanelekileyo, kwaye ayinetyhefu ngaphakathi koxinaniso lomda olusezantsi. Elona dosi liphezulu ekutyeni akufuneki lidlule kwi-0.2 g / kg ngokwamafutha. Xa idosi yayo ingu-0.02%, ingaphezulu kwe-0.01%. Isiphumo antioxidant inyuswe nge-10%. Njenge-antioxidant-soluble antioxidant, i-hydroxyanisole ene-butyl ilungele ukutya okunamafutha kunye nokutya okunamafutha. Ngenxa yozinzo lwayo olufudumeleyo, inokusetyenziswa phantsi kwefry okanye iimeko zokubhaka.
Kwiminyaka yakutshanje, uphando ngezinto ezigcina izinto zendalo lutsala umdla omkhulu koososayensi abavela kwihlabathi liphela, kwaye inani elikhulu leemveliso zokulondolozwa kwendalo ngokubanzi zamkelwe ngabantu, ezinje ngeti polyphenols, ivithamin E yendalo, i-polylysine kunye ne-chitosan.
Ngokubhekisele kwiziqhamo esizithenga kubomi bethu bemihla ngemihla, iingcali zicebisa ukuba okoko nje amashishini esebenzisa izinto zokulondoloza ngokuchanekileyo, abathengi akufuneki bakhathazeke ngemicimbi yezokhuseleko.
Izinto ezisigcinayo: sandise ubomi beshelfu yokutya
Ukugcinwa kokutya kungathintela ukusebenza kweentsholongwane, kuthintele ukutya ukuba kungonakali kwaye konakalise, ngaloo ndlela kwandiswe ubomi beshelfu yokutya. Uninzi lweziyobisi kunye nokutya okuhlanganisiweyo kufuna ukugcinwa ixesha elide, kwaye izinto zokugcina ukutya zihlala zongezwa. Njengoko inxulumene nempilo yabantu, izinto zokulondoloza ukutya zezona zithintelweyo kuzo zonke iintlobo zolondolozo.
Ilizwe lam livume kuphela ukutya okungaphezulu kwama-30 okuvumelekileyo, zonke ezo zinetyhefu encinci kwaye zikhuselekile. Phambi kokuba zivunyiwe ukuba zisetyenziswe, benze uvavanyo oluninzi lwenzululwazi, kubandakanya ukutyiswa kwezilwanyana, ukutyhefa kunye nokuvavanywa kwetyhefu kunye nokuchongwa, kwaye kuye kwaqinisekiswa ukuba azizukubangela nasiphi na isifo esibuhlungu, esibuhlungu okanye esinganyangekiyo emzimbeni womntu.
Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa i-benzoic acid, isodiyam benzoate, asidi ye-sorbic, potassium sorbate, calcium propionatenjl. Kwiminyaka yakutshanje, izinto ezikhuselayo ekutyeni sele ziqalisile ukukhula zikwicala lokhuseleko, isondlo kunye nokungangcoliseki. Izinto zokulondoloza ezintsha ezinje ngeglucose, oxidase, protamine, lysozyme, lactic acid bacteria, chitosan, pectin decomposition products, njl. Kwaye yamkelwe ukuba isetyenziswe ngurhulumente.
Ngapha koko, okoko iindidi, ubungakanani kunye nomthamo wokugcinwa kokutya okusetyenziswa ngabavelisi bokutya kulawulwa ngokungqongqo ngaphakathi komda ochazwe kumgangatho wesizwe "Imigangatho yoCoceko yokuSebenzisa iZongezo zokutya", ngekhe kubekho sengozini kwimpilo yabantu, kwaye abantu banokuqiniseka ukuba batya.
Umzekelo, ukutya okubonwa kwindawo yentengiso kuhlala kuneziqulatho ezinje nge potassium sorbate kunye ne sodium benzoate. Ezi zibambi zimbini zisetyenziswa ngokubanzi zihlala zikhutshwa emchameni hayi emzimbeni emva kokungeniswa ngumzimba womntu. Qokelela.
Ukuba akukho zongezo zokutya
Ukuba akukho antioxidants-
Ukutya okunamafutha, nokuba zizilwanyana zendalo kunye namafutha emifuno okanye ukutya okuthosiweyo, kuya kubangela ubungqongqo ngenxa ye-oxidation kwithuba elifutshane. Abavelisi banokuqhotsa kuphela kwaye bazithengise. Abasasazi kufuneka bahlaziye iishelf zabo yonke imihla. Abathengi baphulukana nemvakalelo yabo yokhuseleko nangakumbi. Ukuhanjiswa kokutya okukude nako kuya kuba nzima.
Ukuba akukho lungiselelo lwe-enzyme-
Iibuns ezihonjisiweyo ezityiwa ngamaTshayina azizukuba zithambile kwaye zimnandi njenganamhlanje. Abantu baseYurophu banokutya kuphela isonka esiqinileyo njengoko benzayo kumaXesha Aphakathi. Ekuphela kwezinto abantu emhlabeni abanokuxhomekeka kuzo sisisu sabo esiswini kunye namathe.
Ukuba akukho buqu-
I-sausage ye-Ham, iisoseji, kunye nenyama ephekiweyo enkonkxiweyo iyakushiya itafile yethu, kuba ukuphulukana nejusi yoqobo ngexesha lokuyilungisa kuyenza incasa njenge-wax ehlafunwayo; Iintlanzi, i-shrimp kunye nokunye ukutya kwaselwandle akunako ukwanelisa ukutya kwabantu ngaphakathi, kuba iprotein iya kulahleka kwinkqubo yokugcina ebandayo. Ukuqunjelwa kunye nokulahlekelwa ngumkhenkce kunye nokunyibilika kuphezulu; Eyona nto ibuhlungu kukuba siphulukana nokubuyiselwa kwakhona emzimbeni kwaye asikwazi nokutya ii-noodles kwangoko.
Ukuba akukho siqinisekiso sokutya-
Kwihlobo elishushu, i-ayisikhrim yethu esiyithandayo iyakugcwala intsalela yomkhenkce kwifriji. Kulusizi ukutya njengamaqhekeza omkhenkce; kulusizi ukulahla; ubisi lwecocoa, ubisi lwejusi yeziqhamo, iyogathi engenazintsholongwane, iiyurti ezahlukeneyo, ubisi olusebenzayo, njl.njl.
Ukuba akukho emulsifier——
Ubisi olungaqhelekanga kunye nocwangco lwamanzi avela kwiziselo. Iswekile kwiimveliso zetshokholethi kulula ukuyicacisa, isonka akukho lula ukusigcina, imajarini kunye nokutya okusemathinini kwahlulwe kwioyile nakumanzi, kwaye i-toffee kunye ne-bubble gum kulula ukuskim nokuncamathela emazinyweni.
Ukuba akukho arhente igwele-
Iibuns ezi-steamed ezithandwa ngabantu basemantla ziya kuba madolw 'anzima ukunikezela, kunye neekeyiki ezithandwa ngabantu basemazantsi. Abantu kwilizwe liphela kufuneka bathi ndlela-ntle kwiintonga eziqhotsiweyo zentlama esele zidliwe ngaphezulu kweminyaka engama-900.
Ngamafutshane, ukuba akukho zongezo zokutya, akuyi kubakho shishini lokutya liphucukileyo kakhulu, kwaye akusayi kubakho bomi obuphezulu banamhlanje.
Umthombo: Inqaku ngoKutya kwasekuqaleni